Celebrities – Healthy Life Journal
၊ လရိပ်မေ ၊ အနုပညာလောကမှာ ခိုင်သဇင်ယုဝါနဲ့ ခိုင်သဇင်ငုဝါဆိုတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်လက်ခံမှု ရရှိထားသူ တွပါ။ ဒီတစ်ပတ်မှာ ခိုင်သဇင်ယုဝါရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှအပစောင့်ရှောက်မှုအကြောင်း မျှဝေထားပါတယ်။ “တစ်နေ့တာ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းရာမှာ လိုးရှင်းကတော့ ပုံမှန်လိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆောင်းတွင်းမှာလည်း...
၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ အကယ်ဒမီခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို မေးမြန်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံလေး ပြောပြပေးပါ။ အဓိကကတော့ ရေများများသောက်တယ်ပေါ့။အခုအသက် ၄၀ကျော်လာတော့ မျက်နှာကို နည်းနည်းပိုပြီး ဂရုစိုက်ရတယ်။ အရင်တုန်းကဆို မျက်နှာပေါင်းတင်တာတွေဆိုရင် အရမ်း Sensitive ဖြစ်တော့ မတင်ဖြစ်ဘူး။...
၊ မီမိုးမေ(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်း၊ ကင်မ်ကာဒါရှိန်းတို့လို ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာလန်ဆာက အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းတွေကို အခုလို ပြောကြားထားပါတယ်။ – ကလေးရှမ်ပူဖြင့် မျက်နှာသစ်ခြင်း အခြေခံကျပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်သင့်တာက ရိုးစင်းတဲ့...
Beauty Blogger နေခြည်ဦး၏ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ
‘အသားအရေထိန်းသိမ်းရာမှာ ရေဓာတ်ကောင်းကောင်းဖြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်’ ၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ ဒီနေ့ခေတ် မိန်းကလေးတွေကြား ရေပန်းစားလာတဲ့ Beauty Blogger နေခြည်ဦးက သူရဲ့ တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံစံနဲ့အတူ တခြားအမျိုးသမီးတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့အလှအပအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုအခုလို မျှဝေထားပါတယ်။ “ မနက်မိုးလင်းရင် ရေကျက်အေးတစ်ခွက် သောက်တယ်။...
အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ လှစေချင်တဲ့အတွက် Healthy Lifestyle ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားချင်ပါတယ် Beauty Blogger ၀င်းမင်းသန်း
၊ အေးမို့မို့ဇော် ၊ မေး။ ။ တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ နေ ထိုင်မှုပုံစံလေးကို ပြောပြပေးပါရှင့်။ ဖြေ။ ။ အရေးကြီးဆုံးက တစ်နေ့မှာ ရေ ၂လီတာ သောက်တယ်။ သောက်တဲ့အခါမှာ တစ်ခွက်တည်းနဲ့ အများကြီး သောက်လိုက်တာထက် ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့...
ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိရှိ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက်
– ဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာအောင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ။ အဓိကကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အပေါ်မှာ ယုံကြည်စွာနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပေါ့။ ဘယ်လောက်အခက်အခဲရှိရှိ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲနဲ့၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ယိုင်လဲမသွားဘဲနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် ရပ်တည်လို့ရတယ် ထင်ပါတယ်။ – စိတ်ဖိစီးမှုရှိလာတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြေဖျောက်ဖြစ်ပါသလဲ။...
နာမည်ကျော် မော်ဒယ်တို့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသော အလှအပရေးရာနည်းလမ်းများ
ငယ်ရွယ်လှပပြီး နာမည်ကျော်တဲ့ Victoria’s Secret မော်ဒယ်တွေက ရှိုးပွဲတွေမှာ တောက်ပ၀င့် ကြားနေရုံသာမက ကင်မရာထဲနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ထဲမှာလည်း ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေ လက်ကိုင်ကျင့်သုံးနေတဲ့ အလှအပနည်းလမ်းတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ – စွမ်းအင် တိုးစေရန် အထူးသဖြင့် ရှိုးပွဲတွေရှိရင် အပိုစွမ်းအင်ရှိနေဖို့...
အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်၊ မော်ဒယ် မေမြတ်နိုး၏ ကျန်းမာလှပလူမှုဘ၀
မေး. တစ်နေ့တာ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖြစ်ပုံလေးကို ပြောပြပေးပါ။ ဖြေ. အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအနေနဲ့ မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်နဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်ကို အဓိကထားပြီး လုပ်တာကတော့ Cleansing ပေါ့။ အသီးတစ်ခုခုနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကြေးချွတ်ပစ္စည်းနဲ့ ကြေးချွတ်တယ်။ အရင်ကဆိုရင် မိတ်ကပ်အရမ်းလိမ်းတော့ ၀က်ခြံတွေအများကြီးထွက်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းဆို ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးကို အိပ်ချင်နေတာတောင်...
– တစ်နေ့တာအတွက် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖြစ်ပုံလေးကို ပြောပြပေးပါဦး။ ပိုပိုက ခရမ်းချဉ်သီးစားတယ်၊ ရေများများသောက်တယ်၊ အသီးအရွက်များများစားတယ်။ ပြီးတော့ ပိုပိုက ၀တဲ့သူဆိုတော့ အရမ်းစားလို့မရဘူး။ ကွေကာအုတ်တွေလည်းသောက်ပါတယ်။ ညဘက် အရမ်းဗိုက်ဆာလာရင် ခရမ်းချဉ်သီးစားတယ်၊ အဲဒီတော့ အသားအရေလည်းလှတယ်။ ၀လည်း မ၀တော့ဘူးပေါ့။ – အစားအသောက်နဲ့...
ကမ္ဘာကျော်တို့သုံးသည့် သဘာဝအသားအရေ ထိန်းနည်းများ
၊ လရိပ်မေ ၊ အဆီအပြည့်ပါသော နွားနို့ နွားနို့နဲ့ရေချိုးတာကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့မင်းသမီးတွေက နွားနို့နဲ့ နေစဉ်ရေချိုးတယ်လို့တောင် ဆိုပါတယ်။ နွားနို့ဟာ အသားအရေကို စိုပြည်စေပြီး အရေပြားမှာလိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို ပြန်လည်လန်းဆန်းအားပြည့်စေပါတယ်။ အဆီအပြည့်ပါတဲ့ နွားနို့က အသားအရေအတွက် အကောင်းဆုံး...